Dood xasaasi ah oo Xildhibaanada kaga doodeen warbixintii Guddiga Maaliyada ee miisaaniyada… – Hagaag.com
Dood xasaasi ah oo Xildhibaanada kaga doodeen warbixintii Guddiga Maaliyada ee miisaaniyada…
Doodii Xildhibaanada Baarlamaanka ka lahaayeen warbixintii Guddiga Maaliyadda ee ka hadleysay miisaaniyadda dowladda ee sanadkan iyo wax is daba marin lagu sameeyay qaabka loo isticmaalay ayaa soo dhamaatay, waxaana warbixintaas ay toosh ku ifisay Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Dooda Xildhibaanada oo aheyd mid xasaasi oo ay hareysay buuq iyo muran ayaa waxaa ugu dambeyn kulanka soo xiray Guddoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad oo xusay in qaabka warbixinta Guddiga ku timid ay aheyd mid qaldan oo aan lala wadaagin Guddiga joogtada.
Guddoomiye Mahad Cawad ayaa ka raalli geliyay wasaaradda Maaliyadda qaladkaas, isagoo si gaar ah u xusay in Guddiga Maaliyadda ay dul duleelo ka dhaceen sida uu yiri
“Waxaan raali-galin ka bixinaynaa in Golaha la keeno xeer ama howl aan lala wadaagin Guddiga Joogtada ah iyo Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana raali-galin ka bixinaynaa hadii qalad naga dhacay. Guddiga Maaliyadda, oo ah guddi aad u shaqa badan, waxaa ka yimid duleel, waxayna guddigu sheegeen in ay ku wada hadleen whatsapp-ka” ayuu yiri Mahad Cawad.
“Baarlamaanku ma sheegin in la lunsaday $40 milyan. Waxaan ka siinaynaa raali-galin shacabka iyo Wasaaradda Maaliyada, war-bixintaanna hab-raac sax ah lama soo marsiin. Xeerkaan halkaas ayaa looga gudbayaa, dib dambana looma keeni karo Golaha” ayuu yiri Mahad Cabdalla Cawad, oo sidoo kale sheegay inuu Kulanka Golaha Shacabku xiran yahay, kadib markii ay Xildhibaano ka tirsan Golaha ka cabteen waqtiga.
Fadhigii maanta oo dood weyn ka dhacday ayaa waxaa ka dhex muuqday in Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka uu kala qeybsamay, waxaana doodan aheyd mid ka mid ah doodihii ugu kululaa ee soo mara Baarlamaanka, tan iyo markii la riday Guddoomiyihii hore Jawaari.